netzay.com.mm : Myanmar Online Shopping, Shopping Websites:netzay ဆိုသည်မှာ
Welcome to netzay.com.mm
NetZay.com.mm is E-commerce website to provide the whole nation Myanmar .
Our Company establish on September 2015 . We develop E-commerce website and survey of Myanmar Market in other side . We started to run in June 2016 as soft launching from website and social media , facebook.
Within6months , We got over 190000 likes till now and daily like range increase maximum 1000 peoples. Website hit ( Including world wide ) is about 1600 ppls per day .
Now we got over 2000 website members who are registered on our website .
Application for android is available now on Google play store at 1st Feb , 2017 . We still not launging for Application ( we haveaplan to launch as Grand opening in3months ) . Downloads count is over 100 currently .
We provide facebook free boosting for each vendor . People reaching for one post is maximum 10000 peoples per day to targeted people.
Our goal is to provide millions of people to buy various kind of product via NetZay quickly, easily with perfect satisfaction.
NetZay ဆိုတာကတော့ အင်တာနက်ပေါ်ကဈေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် အင်တာနက် ပေါ်မှာ လွယ်ကူ ရိုးရှင်းစွာ ဈေးဝယ်လို့ ရနေပါပြီ။ Shopping Mall တွေမှာ ဈေးဝယ်သကဲ့သို့ သင်အလိုရှိသောပစ္စည်းများ ကို netzay.com.mm မှာ ၀ယ်လိုက်ကြပါစို့ !!!
အင်တာနက်လိုင်းမိရုံနဲ့ ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသကမဆို ဈေးဝယ်လို့ ရနေပါပြီ ။ ကဲ! ဒီလိုဆို ကျွန်ုပ်တို့ netzay.com.mm ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ
နံပါတ် ( ၁) အကောင့်ဖွင့်လိုက်ပါ ။ facebook အကောင့်ရှိပြီးသားဆိုလျှင် ထိုအကောင့်ဖြင့်ဈေးဝယ်နိုင်ပါသည်။
အသေးစိတ် ကို /about-login-registration သို့ ကြည့်၍ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်
နံပါတ် (၂) ပစ္စည်းများကို စိတ်တိုင်းကျ ရွေးချယ် ကြည့်ရှုပါ ။ အားနာစရာ စောင့်ဆိုင်းစရာ လုံးဝမလို ။
နံပါတ် (၃) ရွေးချယ်ပြီးသော ပစ္စည်းများကို အော်ဒါတင်ပါ ။ မိမိ ပို့စေချင်သည့် နေ၇ပ်လိပ်စာ ၊ ဖုန်းနံပါတ် အတိအကျ ဖြည့်သွင်းပေးပါ ။
အသေးစိတ် ကို /how-to-shop-at-netzay- သို့ ကြည့်၍ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည် ။
နံပါတ် (၄) သင်မှာယူလိုက်သော ကုန်ပစ္စည်းကို လာပို့နေပါပြီ ။
အသေးစိတ် ကို /payment-delivery သို့ ကြည့်၍ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည် ။
နံပါတ် (၅) သင့်ရှေ့အရောက် ပစ္စည်းရောက်လာပါပြီ ။ လက်ခံရယူပြီး ငွေရှင်းနိုင်ပါပြီ ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀န်ဆောင်မှုများအတွက် မေးမြန်းလို၍ဖြစ်စေ၊ အကြံဥာဏ်ပေးလို၍ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလှမ်းချက်များ ကို သိရှိလို၍ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့Customer ၀န်ဆောင်မှု အဖွဲ့၏ ဖုန်းနံပါတ် 09 2570 60001 သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ .